सबै भन्दा राम्रो रक्सी - गुलाबी। गुलाबी रक्सी बारेमा रोचक तथ्य
हाल, रक्सी उपभोक्ताहरु को बहुमत यसलाई कस्तो स्वाद पनि थाहा छ किन छैन जो, महंगी छ। सबै सामान्य सस्तो, कुनै पनि सुपरमार्केट को समतल मा खडा, एक कृत्रिम तरिका, प्राकृतिक कच्चा माल को एक सानो राशि छ।
विज्ञान को भाषा बोल, रक्सी - यो एक रक्सी सामग्री 22% Vol अधिक छैन एक पेय छ। यो आंशिक (अवरोध) वा पूर्ण किण्वन रस प्राप्त छ। दाखमद्य फल र अङ्गुरको छ, कच्चा माल आधारमा - अङ्गुर वा अन्य जामुन र फल। यसबाहेक, जहाँ शुरू सामाग्री सङ्कलन गरिएको छ ईलाका आधारमा, उत्पादन बाहिर विभिन्न तरिकामा लगे हुन सक्छ। दिइएको इलाका को परम्परा र नियम प्रविधिमा र पेय को स्वाद दुवै, यसको चिन्ह लागू गरिएको छ।
मदिरा को रासायनिक संरचना, त्यहाँ लगभग 600 घटक (जैविक र अकार्बनिक additives) छन्। मुख्य व्यक्तिहरूलाई पानी feedstock, शर्करा (फ्रैक्टोज, ग्लुकोज) र इथाइल अल्कोहल छन्।
एक नजिक दाखमद्य रूपमा, यस प्रकारको अध्ययन मा नजर उठ्नुभयो।
वाइन - यो त पुरातन पेय भन्ने आफ्नो इतिहास बस अज्ञात को "जन्म" को पहिलो उपस्थिति साँचो वर्ष। गुलाबी परम्परागत रातो वा सेतो को पछि गरिएको थियो। यो ज्ञात र राज्य जसमा यो उत्पत्ति छैन।
को पुराना र सिद्ध तथ्य दाखमद्य गुलाबी Rene Anzhu (फ्रान्स राजा, 15 औं शताब्दीमा शासन गर्ने) को धेरै रुचाउनु थियो भनेर संकेत गर्छ। यो पेय एक ठूलो मात्रा को उत्पादन सुरु गर्ने उहाँले थियो। त्यसपछि, प्रोभेन्स मा र रक्सी को उत्पादन सुरु "जंगली गुलाब को रंग।"
आफ्नो प्रसिद्ध कवि, फ्रान्स को मात्र अदालत गाए र निर्वाचित बासिन्दा आफ्नो असामान्य स्वाद थाह थियो। को 18 औं शताब्दीमा गुलाबी रक्सी नजिक छिमेकी देशहरू (नेदरल्याण्ड, ग्रेट ब्रिटेन) को निर्यात भएको थियो। एक सानो पछि, संसारको एक लहर द्वारा gripped थियो "गुलाबी पागलपन।"
आज, फ्रान्सेली मदिरा संग एक बराबरीको मा धेरै लोकप्रिय इटालियन र स्पेनी छन्। र विनिर्माण, को पेय को बिक्री पहिले नै विश्वव्यापी कार्यान्वयन गरिएको छ।
गुलाब रक्सी सबै नियम र विनिर्माण को intricacies गर्न सख्त अनुपालन को परिणाम हो। यो oversaturate बर्बाद पदार्थ peculiar सेतो वा रातो वाइन पिउन एक अद्वितीय रंग मा यो राख्न र महत्त्वपूर्ण छ।
एक गुलाबी रंग कसरी प्राप्त गर्न:
मात्र उच्च गुणस्तरीय अङ्गुर प्रयोग गर्नुहोस्। यो हुन सक्छ: Merlot, Dzhalita गद्दे, Saperavi, क्याबरन - Sauvignon वा ओडेसा कालो।
धेरै होसियार हुनु रातो प्रजातिहरू थिचेर, हामी रस र बीउ शाखा प्रविष्ट गर्न अनुमति सक्दैन।
यसलाई त्यहाँ बाट झिक्न, वा "आक्रान्त" को विधि प्रयोग छ, जो पछि छोटो समयमा लागि समाप्त wort मा बेरी खाल छोड्नुहोस्। ई रेड वाइन उत्पादन परिणामस्वरूप, एक तयार बनाएको रस लिन।
यो भविष्यमा एक पेय सुन्दर गुलाबी रंग दिन हुनेछ।
साथै, केही निर्माता मिश्रण को विधिमा resorted छन्। को गुलाबी रंग तयार बनाएको सेतो र रातो वाइन एक मिश्रण बनाएर प्राप्त छ। तर यस्तो उत्पादन प्रविधि सबै राज्य अमेरिका मा अनुमति छैन।
विनिर्माण गुलाब को एक विधि
एक वास्तविक र स्वादिष्ट पेय प्राप्त गर्न, यो निर्माण को स्पष्ट र सुसंगत प्रविधि पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। रक्सी कस्तो छ, निम्न चरणमा विचार:
1 अंगूर बाली
यहाँ तपाईँले पाकेको को डिग्री विशेष ध्यान गर्न आवश्यक छ। साथै, अङ्गुर सफा हुनुपर्छ। संग्रह अक्सर शायद एक विशेष यांत्रिक उपकरण प्रयोग गर्दछ, स्वयं गरिन्छ।
2. आदेश र कच्चा माल प्राप्त
पुराना रक्सी जहाँ यो विशेष कन्टेनर मा राखिएको छ भंडारगृहों ल्याइएको छन्। एक सोली, उहाँले जामुन कुचल र ridges तिनीहरूलाई अलग रूपमा संयन्त्र डिजाइन गरिएको छ।
3. खण्डीकरणको क्रमलाई
विशेष उपकरणहरू देखि रस अधिकतम रकम प्राप्त गर्न फल बोक्रा आंसू।
4 किण्वन र maceration
Wort जडान र अङ्गुरको कणहरु संग पारस्परिक। उत्तरार्द्ध बलियो खुशबूदार र रंजक समावेश गर्दछ। को को किण्वन र maceration, को धनी स्वाद र गाढा रंग अब। तालिका रक्सी पर्याप्त 3-4 दिन, उच्च गुणस्तरीय मदिरा लागि 20 दिन भन्दा हुनुपर्छ।
5 पहिलो किण्वन (रक्सी)
को जलीय चरण। को 4-10 दिनमा खमीर को कार्य अन्तर्गत अंगूर चीनी मा निहित रक्सी मा परिवर्तित छन्। +200सी को आवश्यक तापमान bentonite थपिएको छ।
6 थिचेर र dekyuvazh (आधारमा रक्सी को प्रकार मा)
यस तरल पदार्थ खर्च नगरेर पछि हटाइएको र भ्याट देखि मज्जा थिचिएको छ। यो एक गुरुत्वाकर्षण-रक्सी प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
7 दोस्रो किण्वन (malolactic)
आवश्यकताअनुसार यसलाई मात्र लगे छ। , लैक्टिक एसिड गर्न malic एसिड रूपान्तरण गर्ने पेय को अम्लता lowering र यसको palatability परिवर्तन गर्नको लागि प्रयोग Lactobacilli।
को wort हल्का र यसको ओक्सीकरण ढिलाइ गर्न, सल्फर प्रयोग गरिन्छ। बाँच्न र अनुपात र प्रविधि राख्न कडाई आवश्यक।
उत्पादन रक्सी मिश्रित प्रविधि सेतो र रातो बनेको उठ्नुभयो। अलिकति परिमार्जन अनुक्रम थिचिएको लागि प्रयोग वा पेय खर्च नगरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ।
सबै भन्दा राम्रो गुलाब वाइन
सबैभन्दा लोकप्रिय र मांग इटालियन हुन मानिन्छ र फ्रान्सेली उठ्नुभयो। तिनीहरू यहाँ अन्यत्र भन्दा पहिले उत्पादन गर्न थाले। निरूपण र गुलाब वाइन को निर्माण को विशेषताहरु संरक्षण र सारा शताब्दीयौंदेखि सुधार। साथै, यो कुनै पनि अन्य अवस्थामा फेला परेन छन् अङ्गुर पाउन सक्नुहुन्छ फ्रान्स र इटाली हामी मा छ।
उत्पादन र रक्सी को बिक्री सन्दर्भमा यी देशहरूको व्यवस्था बरु सख्त र कठोर छ। यो पेय को गुणवत्ता र को naturalness को एक अतिरिक्त ग्यारेन्टी दिन्छ।
फ्रान्सेली रक्सी गुलाब
आज सूर्य संसारभरि लोकप्रिय पिउन। सबै देशहरूमा वसोवास थाहा र गुलाबी रक्सी प्रेम। फ्रान्स - अन्य निर्माताहरु बीचमा एक विशेष ठाउँ छ कि एक राज्य। यसको क्षेत्रहरु रक्सी सिर्जना संलग्न को वस्तुतः सबै।
विशेष ध्यान प्रोभेन्स विनियोजन गर्नुपर्छ। यहाँ रक्सी को पहिलो प्रमुख उत्पादन थाले, अग्रणी फ्रान्सेली क्षेत्र उहाँले हाम्रो समय मा रहनेछ। प्रोभेन्स को उत्पादन गुलाबी पेय देखि अङ्गुर Senso, Grenache र Mourvedre विशेषता मतभेद प्रकाश टिप्पणीहरू स्ट्रबेरी स्वाद मानिन्छ जो गरे।
सबै भन्दा प्रसिद्ध ब्रान्ड गुलाबी पेय पनि anjou र यात्रा उपलब्ध छन्।
यात्रा - यस Rhone उपत्यकाका एउटा सानो गाउँमा। यसको विशेष सुविधा मात्र9अङ्गुर त्यहाँ हुर्केका र केवल गुलाब वाइन उत्पादन गर्दै छ। Anjou - क्लासिक पेय उत्पादन गर्ने एक क्षेत्र गुलाब को रंग छ।
यस्तो प्रसिद्ध लागि जानिन्छ उत्तरार्द्ध जा , रक्सी को प्रकार जस्तै:
- अर्ध-सुक्खा "गुलाब d'anjou।" अलिकति पानी जस्तो, कुनै उज्यालो उच्चारण स्वाद र स्वाद।
- अर्ध-सुक्खा "क्याबरन d'anjou।" स्ट्रबेरी रंग को वर्तमान स्वाद।
- वाइन गुलाबी सुक्खामा "गुलाब डे लयर», एक ताजा सुगन्ध र एक नाजुक aftertaste संग।
सबै भन्दा फ्रान्स राम्रो पेय गरे। कुनै कम प्रसिद्ध मदिरा, रक्सी र Sancerre फेला, सबै सामान्य "बरद" र "मारसने" उल्लेख छैन।
स्पेनी र इटालियन रक्सी
यी देशहरूमा गुलाबी पेय लागि स्वागतम अंगूर विविधता tempranillo र Garnacha प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ रक्सी "Rosado" भनिन्छ। नरम फ्रान्सेली गुलाब गर्न यसको विपरीत, यो थप रक्सी, र यसको थप क्रूर र उच्चारण को स्वाद समावेश गर्दछ।
गुलाब को स्पेन मदिरा ला Rioja र Navarre को प्रान्त सम्बन्धित छन्। र इटाली Rosado मा वैश्विक पहिचान यसलाई अझै प्राप्त भएको छैन तापनि गरिएको सबैतिर उत्पादन। सायद किनभने पनि उज्ज्वल को स्वाद स्थानीय जनसंख्याको पेय Incendiary वर्ण हस्तान्तरण।
गुलाब स्पार्कलिंग वाइन शैम्पेन को उत्पादन नजिक एक विधि द्वारा उत्पादित गर्दै छन्। यसको अर्थ दाखमद्य दुई पटक किण्व | | खमीर गर्नुपर्छ भन्ने छ। पहिलो - एक विशेष कन्टेनर, दोस्रो - सीधा बोतल मा। बाक्लो गिलास को कन्टेनर मा गुलाबी चम्केको मदिरा पोखे, यो सर्त आफ्नो विशेषताहरु को संरक्षण को लागि आवश्यक छ।
नायाब स्वाद र यो पेय को स्वाद पूर्ण उज्ज्वल Saturated रंग द्वारा complemented छ।
परम्परागत धेरै उच्चारण विशिष्ट सुगन्ध देखि प्रतिष्ठित। यसको उत्पादन लागि मस्कट अङ्गुर प्रयोग गर्दछ। तिनीहरूले जो पेय एक असामान्य स्वाद दिन आवश्यक तेल, एक उच्च सामग्री छन्।
मस्कट गुलाबी (रक्सी) अक्सर एउटै अंगूर विविधता देखि बनेको छ। तर यो प्रयोग र आफ्नो प्रजाति को अरूलाई गर्न सकिन्छ। मदिरा को सबै प्रकार को सबै भन्दा सुगन्धित पेय रूपमा बुझे।
"Lambrusco" - गुलाबी रक्सी
यो रातो देखि बनेको छ अङ्गुर। यो पेय को स्वाद उज्ज्वल fruity टिप्पणीहरू भरिएको छ। उहाँले इटाली (लोम्बार्डी र Emilia Romagna) मा प्रदर्शन। मदिरा को नाम तिनीहरू छन् जो देखि नै अंगूर किसिम।
को व्यापक पेय "Lambrusco" को पहिलो उल्लेख पुरातन समयका बुझाउँछ। उहाँले रोमी द्वारा धेरै प्रेम थियो। समय, दाखमद्य परिमार्जन गरिएको छ, यो विभिन्न प्रकारका देखियो। आज त्यहाँ 60 भन्दा बढी प्रजातिहरू र भिन्न छन्। यो एक अपेक्षाकृत सस्ती रक्सी छ।
एक गुलाब रक्सी कसरी चयन गर्ने?
मूल्यांकन को मुख्य मापदण्ड पेय रंग र स्वाद हो। निर्माता पनि महत्त्वपूर्ण छ, तर आज उच्च गुणस्तरीय गुलाब रक्सी सबै दुनिया भर उत्पादन गरिएको छ। गुलाब को विशेष hallmarks उज्यालो fruitiness र ताजा अम्लता मानिन्छ।
रंग सन्दर्भमा दायरा व्यक्त गर्न रातो को उज्यालो गुलाबी छाया बाट फरक हुन्छ। यसलाई जो देखि रक्सी बनेको छ अंगूर को विविधता मा निर्भर गर्दछ।
के ध्यान मुख्यतया तिर्न गर्नुपर्छ:
निर्माता। प्रत्येक बोतल मा, अपवाद बिना निर्माता द्वारा निर्दिष्ट हुनु पर्छ, यो गुणस्तर उत्पादन को एक जरूरी छ।
क्रप वर्ष। त्यो संग्रह, बरु उमेर बढन वा bottling को वर्ष भन्दा। यो उत्पादन प्राकृतिक छ कि एक ग्यारेन्टी दिन हुनेछ।
अङ्गुर प्रजातिहरू। लेबल विविधता विशिष्ट नाम संकेत हुनुपर्छ।
निर्माण को ठाउँ।
धीरज को अवधि। यो सूचक अनुसार मदिरा3प्रकार मा विभाजित छन्। साधारण - कुनै ढिलाइ, पुराना - 3-7 वर्ष, संग्रह -6वर्ष भन्दा बढी।
यस पेय को संक्षिप्त विवरण। यहाँ यस विशेष रक्सी केही अद्वितीय र विशेष विशेषताहरु सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ।
लागत। , राम्रो प्राकृतिक र गरेको सबै रक्सी को नियम सस्तो हुन सक्दैन।
काग। जब तपाईं खोल्न बोतल उनको अवस्था ध्यान गर्नुपर्छ। को काग crumbled वा तल भङ्ग भने, कुकिङ प्रविधिहरू उल्लङ्घन वा blockage पेय गरिएको छ। वा कम गुणस्तर सामाग्री प्रयोग भएको थियो।
के रक्सी बेचे। हाल, गुलाब ग्लास बोतल मा बोतलबंद छ। चीनी माटो, गत्ता र अन्य सामाग्री सही रक्सी को स्वाद कायम गर्न सक्दैन।
सही ढंगले पेय को बल निर्दिष्ट। गढवाले वाइन - 12-160ब्रांडेड मिठाई लागि देखि, 17-200(जायफल, पोर्ट, Kagor आदि), Vermouth - 13-18 0, चम्केको रक्सी - 11-13 0।
यस पेय उत्पादन देश गुणस्तर र शर्करा को प्रतिशत असर गर्दैन (, मिठाई अर्द्ध-मीठा, ड्राई, अर्ध-सुक्खा)। तिनीहरूले प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो विवेक र स्वाद मा छनोट।
वाइन - एक महान पेय। infographics (दाखमद्य एक जोडी को चयन) र पिउने को एक निश्चित शिष्टाचार - यो खपत यसको आफ्नै संस्कृति छ। गुलाब रक्सी पिउन कसरी र के बारे आधारभूत प्रश्नहरू हामी जवाफ? समीक्षा फरक फेला परेन, तर पेय infographics को तथाकथित नियम मा एक नजर।
चम्केको पूर्ण मुख्य व्यञ्जन को स्वाद accentuate गुलाब (यो पास्ता, risotto, र यति मा। एन हुन सक्छ)। तातो नाश्ता - गुलाबी-मीठा रक्सी फल मिठाईहरू र नम लागि उपयुक्त छ। ड्राई मदिरा बस पनीरों सबै प्रकारका लागि बनाईएको हो।
सामान्य मा, एक गुलाब विभिन्न व्यञ्जन संग संयोजन गर्न एकदम बहुमुखी पेय छ।
दाखमद्य बारेमा असामान्य तथ्य
संसार र आज वरिपरि यसको लोकप्रियता संरक्षित छ कि पुरातन पेय - त रक्सी बारेमा भन्छन्। हामी तपाईंलाई उहाँको बारेमा सबैभन्दा रोचक तथ्य भन्नेछु।
- सबैभन्दा प्राचीन पेय रक्सी समावेश - वैज्ञानिकहरु रक्सी भनेर पहिचान गरेको छ। तिनीहरूले विश्वास छ कि यो 50 भन्दा बढी हजार। साल।
- शब्द "रक्सी" बाइबल 450 पटक उल्लेख मा।
- देखि 1800 ई.पू.। ई। बेबिलोन कोड हुन्थे मा, कानून गरिबी रक्सी उत्पादकहरु मारिए (तिनीहरूलाई डुबेर मर्छन्) छन्।
- पुरानो रक्सी को एक बोतल जर्मनी मा फेला परेन। मिति यसलाई plugging - 325 ई.पू.। ई।
- पहिलो रेकर्ड रक्सी - Sherry "डी ला Frontera"। केवल5बोतल, क्रप 1775 मा फसल थियो जसको लागि।
- औसत तथ्याङ्क रक्सी यसलाई आफ्नो स्वाद हराउछ, 10 भन्दा बढी वर्षको लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ।
- 1 बोतल «Troskenbeerenauslese» को उत्पादन जर्मन रक्सी vintner लागि एक पुरा दिन खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक अद्वितीय उच्च गुणस्तरीय पेय छ।
- तपाईं गाढा अङ्गुर संग बोक्रा हटाउन भने, तपाईंले एक प्राप्त गर्न सक्छन् सेतो रक्सी।
- «एस्टन मार्टिन» - राजकुमार चार्ल्स को कार, biofuel मा चलिरहेको। यसको peculiarity ईंन्धन रक्सी देखि झिकिएको छ भन्ने छ।
सूर्य आज संसारभरि गरिन्छ पिउन। अन्टार्कटिका बाहेक सबै महादेशमा आफ्नो निर्माण मा संलग्न छन्। महान, ताजा, invigorating, यो घटना कुनै पनि प्रकारको लागि एक उत्कृष्ट विकल्प यसलाई रोमान्टिक साँझ वा व्यापार कुराकानी, एक परिवार खाने वा अनुकूल बैठक हुन कि छ।
दाखमद्य थियो छ र कुनै पनि ठाउँमा र कुनै पनि समय मा, सधैं साँचो हुनेछ।
घरमा एक जाम बाहिर रक्सी खाना पकाउने
रक्सी (वाइन)। पेस्ट्री
को काग भङ्ग गर्दा कसरी शैम्पेन खोल्न? एक शैम्पेन बोतल मा के काग?
"Bull's-आँखा" (ककटेल): नुस्खा सामाग्री
Corona बियर - मेक्सिकोमा सूर्य एक प्रतीक
"Valpolicella" (रक्सी): वर्णन, प्रकार, सुविधा र समीक्षा
स्केट्स Nordway: लाभ र सुविधाहरू
विजेता Ryzhakov: जीवनी, रचनात्मकता र व्यक्तिगत जीवन
Polyurethane तामचीनी: अवलोकन, विशेषताहरु, प्रकार, आवेदन
उद्यम उत्पादन लागत को प्रकार
बिन - यो के हो? बिन कार्डहरू के हो?
किन गर्भवती बिरालो को सपना? को अनौठो सपना कसरी decipher गर्न?
मेट्रो स्टेशन "Ochakovo"। जहाँ यो भूमिगत स्थित गरिनेछ "Ochakovo"?
क्रोनेपिनज फ्रेडरिक (डेनमार्क): जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
"द beavers र बतख" Pyatnitskaya मास्को मा। रेस्टुरेन्ट, मेनु, समीक्षा को विवरण
पानी मा दलिया